Caro ka dhalatay hoggaamiye Maleyshiyo oo loo magacaabay madaxa Telefishin Qaran | Baahin Media
Caro ka dhalatay hoggaamiye Maleyshiyo oo loo magacaabay madaxa Telefishin Qaran
Jul 14, 2019 - jawaab
Hoggaamiyaha koox Maleyshiyo ah oo ka howl gasha dalka Burundi, taasoo lagu eedeeyay falal qalalaase iyo arxan darro ah, ayaa loo magacaabay inuu noqdo madaxa Telefishinka Qaranka dalkaas ee RTNB, waxayna arrintaas kicisay caro weyn iyo cambaareyn ka imaaneysa kooxaha u ol’oleeya xuquuqda aadanaha.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa sheegtay in magacaabista Eric Nshimirimana ay tahay “mid niyad jab ku ah dhammaan dhibbaneyaashii ay waxyeellada u geysatay kooxda Imbonerakure”.
Waxay sidoo kale hay’addu sheegtay in tallaabadaas “ay xadgudub ku tahay xorriyadda saxaafadda ee dalka Burundi”.
Kooxda Imbonerakure ayaa lagu eedeeyay inay falal isugu jira dil, dhac iyo kufsi u geysatay dad u dhaqdhaqaaqa ururrada mucaaradka ee waddankaas.
Hase ahaatee, dowladda Burundi ayaa gaashaanka ku dhufatay dhammaan eedeymaha la xiriira tacaddiyada bani’aadannimada ee loo jeediyay kooxdaas.
Imbonerakure, oo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga talada haya ee CNDD-FDD, ayaa marar badan lagu dhaliilay inay geysteen qalalaase, xilligii uu madaxweyne Pierre Nkurunziza sida muranka dhalisay ku raadinayay inuu markii saddexaad xilka madaxweynaha ugu tartamo, sannadkii 2015-kii.
Mr Nkurunziza ayaa markii dambe ka badbaaday iskuday afgambi iyo mudaharaadyo, iyadoo kumannaan qof oo reer Burundi ahna ay ku barakaceen qalalaasaha.
Lewis Mudge, oo ah agaasimaha hay’adda Human Rights Watch ee bartamaha Africa ayaa BBC-da u sheegay “in tacaddiyadaas ay ka mid yihiin dilal, xarig, handadaad iyo jirdil, ilaa iyo haddana ay sii socdaan”
“Nshimirimana waxay ahayd in lagula xisaabtamo waxa dhacay ee uu raalliga ka ahaa, intii lagu abaalmarin lahaa inuu hoggaamiyo warbaahinta kaliya ee kusoo hartay dalkaas”, ayuu yidhi Mr Mudge.
Qaramada Midoobay ayaa horay Imbonerakure ugu aqoonsatay inay tahay koox maleyshiyo ah, inkastoo magacaas ay aflagaaddo ku tilmaameen mas’uuliyiinta kooxda.
Doorashooyin cusub ayaa la filayaa inay Burundi ka dhacaan sannadka soo socda.
Iyadoo isbaddal cusub oo dastuurka lagu sameeyay sannadkii 2018-kii uu madaxweynaha u oggolaanayo inuu mar kale isasoo sharraxo, ayuu haddana Mr Nkurunziza sheegay inuusan usoo istaagi doonin xilka.
© 2019 Baahin Media - All rights reserved.